शीर्ष 8 Cryptoсurrency लागि सबै भन्दा राम्रो मोबाइल आवेदन - Blockchain समाचार
शीर्ष 8 Cryptoсurrency लागि सबै भन्दा राम्रो मोबाइल आवेदन
तपाईं गुप्त-मुद्राहरू संग व्यापार गर्न धेरै समय समर्पित भने, त्यसपछि तपाईं मोबाइल आवेदन बिना गर्न सक्नुहुन्न. हामी सबैभन्दा सुविधाजनक र लोकप्रिय आवेदन को आठ संकलन गरेका छन्, जो आफ्नो स्मार्टफोन हुनुपर्छ.
शीर्ष 8 Cryptoсurrency लागि सबै भन्दा राम्रो मोबाइल आवेदन को
यहाँ तपाईँले पाठ्यक्रम परिवर्तन बारेमा सबै जानकारी प्राप्त र होनहार सिक्का लगानी गरेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ. यो सूचीमा थप्न तिनीहरूलाई पर्याप्त छ र तपाईं भन्दा बढी को पाठ्यक्रम मा उतार चढाव ट्रयाक गर्न सक्षम हुनेछ 2,000 सिक्का. यो सबै भन्दा लोकप्रिय विनिमय आदानप्रदान समर्थन, कोइनबेस सहित, Bittrex, Bithumb, Poloniex, Binance, Coinone र Bitfinex.
अनुप्रयोगलाई काम गर्दछ एन्ड्रोइड र आईओसी
परीक्षक Bitcoin पनि मनिटर मुद्रा विनिमय दर मद्दत गर्छ. भन्दा बढी जानकारी सङ्कलन 80 आदानप्रदान. एप्लिकेसनमा, तपाईं मार्फत समय अन्तराल सेट गर्न सक्नुहुन्छ र अद्यावधिक मूल्यहरु सूचनाहरू प्राप्त हुनेछ. साथै, तपाईं ध्वनि सूचनाहरू कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ.
अनुप्रयोगलाई मात्र काम गर्दछ एन्ड्रोइड
Earn.com – तपाईं सन्देश र कार्यहरू गर्न जवाफहरू लागि bitcoins कमाउन सक्नुहुन्छ जो संग एक निलम्बन. तिनीहरूले Bitcoin-पर्स वा कोइनबेस विनिमय मार्फत cashed गर्न सकिन्छ. तर यो क्रममा यहाँ मूर्त पैसा कमाउन भनेर टिप्पण लायक छ, तपाईं गुप्त समुदायमा केही वजन गर्न आवश्यक र गुप्त मुद्रा को विषय को राम्रो समझ छ. तपाईं एक लोकप्रिय ट्विटर खाता छ भने आफ्नो जवाफ विशेष गरी सराहना गरिनेछ.
अनुप्रयोगलाई काम गर्दछ एन्ड्रोइड र आइओएस
यो अनुप्रयोग तपाईं आउटलेटहरू र आफ्नो क्षेत्रमा bitcoins लागि सामान र सेवाहरू बेच्न मानिसहरूलाई बारेमा भन्नेछु. के भित्र छ? अन्तरक्रियात्मक नक्शा, नजिकैको आउटलेटहरू एउटा अद्यावधिक सूची, मनपर्ने पसलहरूमा को सूची र Bitcoin रूपान्तरणको लागि एक कैलकुलेटर.
BitBuds Mingle को cryptocurrency समुदाय लागि सामाजिक सञ्जाल एक प्रकारको छ. विकासकर्तालाई को लक्ष्य संसारभरि गुप्त-उत्साही एकजुट र तिनीहरूलाई लागि छलफल मंच सिर्जना गर्न छ. त्यसैले यहाँ तपाईं आत्म-शिक्षा गर्न सक्नुहुन्छ, प्रश्न सोध्नुहोस, अरूलाई मद्दत गुप्त-मुद्राहरू बुझ्न, समस्या छलफल र नयाँ मित्र बनाउन. एप्लिकेसनमा, तपाईं फोटो र भिडियो अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ, च्याट सिर्जना, व्यक्तिगत पत्राचार र विनिमय फाइलहरू सञ्चालन.
को Gliph आवेदन गुप्त मुद्रा मालिकहरूको लागि Avito जस्तै कुरा हो. प्रयोगकर्ता किन्न र सीधा प्रत्येक अन्य संग अन्तरक्रिया गरेर bitcoins लागि सामान र सेवाहरू बेच्न सक्नुहुन्छ. भित्र Gliph सुरक्षित दूत र भुक्तानी प्रणाली छ, जो संग तपाईंले आवेदन नै भित्र लेनदेनको सञ्चालन गर्न सक्छन्.
दुई-कारक पहिचान सँग आफ्नो खाता सुरक्षा गर्न एक आवेदन. शायद, यो आफ्नो वालेटमा फोन बाँधिएको छ भने सेट गर्नुपर्छ भनेर पहिलो कुरा हो. आवेदन इन्टरनेटमा जडान बिना कोड उत्पन्न, धेरै संचालक र खाता समर्थन गर्न सक्छौं र स्वचालित रूपमा QR-कोड प्रयोग गरेर कन्फिगर गरिएको छ. QR कोड प्रयोग गरेर खाता थप्न, तपाईं क्यामेरामा आवेदन पहुँच दिन आवश्यक.
को CoinPaper आवेदन एक वालपेपर रूपमा यन्त्र पृष्ठभूमि मा गुप्त मुद्रा को नवीनतम मूल्य देखाउँछ. सुविधा तपाईं अब गुप्त मुद्रा को मूल्यहरु जाँच गर्न बस विशेष आवेदन खोल्न आवश्यक हुनेछ छ. सबै, समय मात्रा मा रंग योजना देखि सुरु, पूर्णतया कन्फिगर गर्न योग्य छ. मूल्यहरु CryptoCompare एपीआई मार्फत हरेक मिनेट अद्यावधिक.
TabTrader लोकप्रिय आदानप्रदान मा गुप्त मुद्रा व्यापार को लागि एक मुक्त टर्मिनल छ. तिनीहरूमध्ये Bitstamp छन्, HitBtc, Huobi, क्राकेन, Bitfinex, कोइनबेस, Bittrex र अरूलाई. गुप्त मुद्रा विभिन्न जोडी को व्यापार गर्न अनुमति दिन्छ: Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, लहर, Namecoin, तारकीय, Etherium. अन्य कुराहरु, अनुप्रयोगलाई Reddit देखि समाचार छ, Coindesk र ​​Bitcoin पत्रिका.
पावेल Durov प्रयोग सोध्छन् ...
गुप्त विनिमय कसरी सिर्जना गर्ने
हामी आफ्नो एक प्रस्तुतिको ...
अघिल्लो पोस्ट:Blockchain समाचार 18 जनवरी 2018
अर्को पोस्ट:Blockchain समाचार 19 जनवरी 2018